Inta sano ee Maxamed Bin Salman uu xukunka haysan doono oo la shaaciyey - Caasimada Online
Home Dunida Inta sano ee Maxamed Bin Salman uu xukunka haysan doono oo la...
Inta sano ee Maxamed Bin Salman uu xukunka haysan doono oo la shaaciyey
Dubai (Caasimada Online) – Hogaamiyaha dibad Jooga ah ee Fatax ahna lataliyaha dhaxal sugaha Imaaraatka Carabta Maxamed Dahlaan, ayaa shaaciyay waqtiga uu dhaxal sugaha Sacuudiga uu xilka dalkaasi heyn doono.
Maxamed Bin Salmaan, ayuu sheegay in xukunka Sacuudiga uu heyn doono 50 sano oo soo socota, sida uu sheegay lataliyaha dhaxal sugaha Imaaraatka Carabta.
Maxamed Dahlaan, ayaa hadalkaan jeediyay kadib wareysi uu siiyay Al Carabiya TV, waxaana uu yiri “Warar xan ah ayay baahiyeen Warbaahinta Qatar iyo Turkey kuwaasi oo lagu carqaladeynayo Masar iyo Sacuudiga”.
“Maxamed Bin Salmaan wuxuu awooda Sacuudiga iyo xukunka heyn doonaa 50 sano oo soo socoto, ilaa in faragelin rabaani ah ku timaado mooyee”ayuu yiri Maxamed Dahlaan.
Wareysiga lala yeeshay Maxamed Dahlaan ayaa la baahiyay iyadoo ay jiraan mowjado cambaareyn ah oo ku aadan dhaxal sugaha Sacuudiga, taasi oo la xiriirta Dilka Wariye Jamaal Kashoqji oo dhacay 2 October ee sanadkaan.
Waxaana Warbixino sirdoon oo soo baxayay ay shaaciyeen in Dhaxal Sugaha Sacuudiga Maxamed Bin Salmaan uu isaga lahaa amarka lagu dilay wariyaha oo ka dhex dhacay Qunsuliyadda ay ku leeyihiin dalka Istanbul.
Dahlaan, wuxuu beeniyay in kooxo hubeysan ay si toos ah u weerareen isaga, sabab la xiriirta in dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed Bin Salmaan uu booqday lanna kulmay Todobaad ka hor.
Wargeyska Yeni Safak ee dalka Turkey, ayaa isaga oo soo xiganaayo ilo xog ogaal ah uu u dhashay dalalka Sacuudiga iyo Falastiin wuxuu sheegay in Maxamed Bin Salmaan iyo Boqorka Imaaraatka ay ka dalbadeen Maxamed Dahlaan inuu qaato masuuliyadda dilka wariye Jamaal Kashoqji islamarkaana uu iska dhigi ruuxii qorsheeyay kadibna amray dilka wariyaha, si loo difaaci Bin Salmaan, laakiin wuu iska diiday.
Maxamed Dahlaan ayaa fadhigiisu wuxuu yahay magaalada Dubai tan iyo 2011 xiligaasi oo ururka Fatax ay ceriyeen sabab la xiriirta inuu dhaawacayo amaanka qaranka Falastiin, isaga oo sameynaya faa’iido xad dhaaf ah.